Izindaba - eva foam mat material Features and precautions
eva foam mat material Izici kanye nokuqapha
Omata baphansi be-EVA basetshenziswe kabanzi emsebenzini nasempilweni, futhi kuyabonakala emakhaya, ezindaweni, ezindaweni zokuvivinya umzimba nakwezinye izindawo. Ukukhiqizwa kwezinto ze-EVA usebenzisa amacansi phansi kunezinzuzo eziningi. Isibonelo: ukumelana okuhle kokushaqeka, ukungena kwamanzi, ubufakazi bukagesi, njll. Sazise ngezinto ze-EVA.
Izici ze-EVA foam floor mata:
Ukumelana namanzi: ukwakheka kwamaseli okungangeni moya, akukho ukumuncwa kwamanzi, ukumelana nomswakama, nokumelana namanzi okuhle.
Corrosion ukumelana: ukumelana nokugqwala kwamakhemikhali njengamanzi olwandle, igrisi, i-asidi, i-alikhali, i-antibacterial, non-toxic, ayinaphunga, futhi ayinakho ukungcola.
Ukuqhubekeka: Awekho amalunga, futhi kulula ukuwacubungula njengokucindezela okushisayo, ukusika, ukunamathisela, nokubopha.
Ukulwa nokudlidliza: ukuqina okuphezulu nokulwa nokungezwani, ukuqina okuphezulu, ukusebenza okuhle kokushaqeka nokusebenza kokuqinisa.
Ukufakwa kwe-Thermal: ukwahlukanisa okushisayo okuhle kakhulu, ukulondolozwa kwamakhaza nokusebenza okushisa okuphansi, futhi kungamelana nokubanda okukhulu nokuchayeka.
Ukufakwa komsindo: iseli elingangeni moya, umphumela omuhle wokuvikela umsindo.
Lapho okuqukethwe kwe-vinyl acetate ku-EVA kungaphansi kwama-20%, kungasetshenziswa njengeplastiki. I-EVA inokumelana okuhle nokushisa okuphansi. Izinga lokushisa lokubola elishisayo liphansi kakhulu, cishe ngama-230 ° C. Njengoba isisindo samangqamuzana sikhula, iphuzu lokuthambisa le-EVA liyakhula, futhi ukucubungula kokusebenza kanye nokucwebezela kwezingxenye zepulasitiki kuyancipha, kepha amandla ayakhuphuka nomthelela ukuqina nokucindezela kokuqhekeka kwengcindezi kwemvelo kuyathuthukiswa. Ukumelana kwamakhemikhali nokumelana no-oyela kwe-EVA kubi kakhulu kunalokho kwe-PE ne-PVC, futhi ushintsho lubonakala kakhulu ngokwanda kokuqukethwe kwe-vinyl acetate.
Uma kuqhathaniswa ne-PE, ukusebenza kwe-EVA kuyathuthukiswa, ikakhulukazi ngokuqina, ukuguquguquka, ukucwebezela, ukungena komoya, njll. Ingasetshenziswa ngokugcwalisa okuthe xaxa kokuqinisa. Izindlela zokugwema noma zokunciphisa ukonakaliswa kwezakhiwo zemishini ye-EVA kune-PE. I-EVA nayo ingashintshwa ukuthola izinhlelo ezintsha. Ukuguqulwa kwayo kungabhekwa kusuka ezicini ezimbili: eyodwa ukusebenzisa i-EVA njengomgogodla wokuxhunyelelwa kwamanye ama-monomers; okunye ukuphuza i-EVA kancane.
Ukwelashwa kwe-EVA mat nokunakekelwa
Indlela yokulwa nomlilo:izicishamlilo kufanele zigqoke izifihla-buso zegesi nezingubo zokulwa nomlilo ezigcwele, bese zicisha umlilo ohlangothini oluphezulu. Ukucisha i-ejenti: inkungu yamanzi, igwebu, impuphu eyomile, isikhutha, inhlabathi enesihlabathi.
Ukwelashwa okuphuthumayo:Hlukanisa indawo engcolisiwe evuthiwe futhi unqande ukufinyelela. Sika umthombo womlilo. Kunconywa ukuthi abasebenzi abaphendula ngesimo esiphuthumayo bagqoke izifihla-buso zothuli (buso obugcwele) namasudi okuqinisekisa igesi. Gwema uthuli, shanela ngokucophelela, faka esikhwameni bese udlulisela endaweni ephephile. Uma kunenani elikhulu lokuvuza, kuqoqe ukuze kusetshenziswe kabusha noma ukuhambise endaweni yokulahla imfucuza ukuze kulahlwe.
Inothi Lokusebenza:Ukusebenza komoya, kunikeza izimo ezinhle zokungenisa umoya. Ama-opharetha kufanele aqeqeshwe ngokukhethekile futhi alandele ngokuqinile izinqubo zokusebenza. Kunconywa ukuthi opharetha bagqoke imishini yokuphefumula yothuli lokuzihlunga, izibuko zokuphepha kwamakhemikhali, izingubo zokuzivikela namagilavu ​​enjoloba. Hlala kude nemithombo yomlilo neyokushisa, futhi ukubhema akuvunyelwe ngokuphelele emsebenzini. Sebenzisa izinhlelo zokungenisa umoya zokuqhuma kanye nemishini. Gwema ukudala uthuli. Gwema ukuxhumana nama-oxidants nama-alkalis. Lapho uphatha, layisha futhi wehlise ngokunakekela ukuvimbela ukonakala kokupakisha neziqukathi. Ifakwe izinhlobo ezihambisanayo nobuningi bemishini yokulwa nomlilo kanye nemishini yokwelashwa okuphuthumayo. Iziqukathi ezingenalutho zingaba izinsalela eziyingozi.
Inothi Lokugcina:Gcina endaweni epholile, yokugcina umoya. Hlala kude nemithombo yomlilo nokushisa. Kufanele igcinwe ngokuhlukile kusuka kuma-oxidants ne-alkalis, futhi igweme isitoreji esihlanganisiwe. Ifakwe ukuhluka okufanele nobungako bemishini yomlilo. Indawo yokugcina kufanele ifakwe izinto ezifanele ukuqukatha ukuvuza.
Enqubeni yokuhlobisa nenqubo yokuhlobisa, uma ukhetha okokusebenza kwe-EVA njengezinto zekhaphethi, ungazisebenzisa ngokuphepha le nto entsha ngokunaka izinkinga ezichazwe ngenhla. Abathengi akufanele bakhohlwe uhlobo lomkhiqizo nokuthengiswa ngemuva kwawo lapho bethenga izinto zokwakha. Lokhu futhi kuyisihluthulelo sezinto zokwakha.
I-Thick Flooring Puzzle Ukuzivocavoca Mat, Isikhwama Sokuhamba seYoga, Isikhwama seYoga Mat sokuhamba, Isikhwama se-Yoga Sling, I-Yoga Mat Enethawula Phezulu, iphazili yokuzivocavoca mat,